किन खस्यो स्थानीय चुनाबमा भन्दा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम मत ? कारणहरु !
किन खस्यो स्थानीय चुनाबमा भन्दा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम मत ? कारणहरु –
संवाददाता : रारा सञ्चार प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०७४, सोमबार ०९:२८ प्रकाशित मिति : नोभेम्बर 27, 2017
स्थानीय निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कम मत
स्थानीय चुनावमा समग्रमा ७३ प्रतिशतको हाराहारीमा जनताले उत्साहपूर्वक मतदान गरेका थिए । आइतबार ३२ जिल्लामा भएको पहिलो चरणको आम निर्वाचनमा भने औषतमा ६५ प्रतिशतले मात्रै मतदानमा भाग लिए ।
ती जिल्लाका बासिन्दाहरु काठमाडौंमा व्यापार व्यवसाय गर्ने, ट्याक्सी चलाउनेदेखि सरकारी र निजी क्षेत्रमा जागिर खाने काम गर्छन् । उपत्यका ’roundका जिल्लाका गाउँ नै खाली बनाएर उनीहरु शहर पसेका छन् । भूकम्पपछि त झनै गाउँहरु रित्तो अवस्थामा छन् । उनीहरुको मतदाता नामावलीमात्रै गाउँमा छ, मानिसहरुचाहिँ शहरमा छन् ।
स्थानीय चुनावको भन्दा मतदाताहरु केही थपिएकाले अंक गणितमा खासै ठूलो फरक नपर्ला, तर कम मत खस्दाखेरि यसको नकारात्मक असर नेपाली कांग्रेसलाई भन्दा बढी वामपन्थीहरुलाई पर्न जाने देखिन्छ । ’cause वामपन्थीहरुले चुनावी तालमेलबाट बढाएको मत बाकसमा कम पर्नु भनेको उनीहरुका लागि निकै ठूलो घाटाको विषय हो ।
४ पुस २०७४, मंगलवार ०७:३४
कोरोना संक्रमण रोक्ने निषेध आज्ञाको चाल : सर्वसाधारणलाई काल, व्यापारीलाई मालामाल
११ भाद्र २०७७, बिहीबार १०:२६